၂၆ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၄
အခုရက်ပိုင်း ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ထူးခြားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့်မှာ လက်ရှိ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပဲ သင်ကြားနေတဲ့ ဓာတုဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ နဲ့ သင်္ချာ ဘာသာရပ်တွေကို မြန်မာဘာသာနဲ့ ပြောင်းလဲ သင်ကြားတော့မယ် ဆိုတဲ့ သတင်းပါ။ ချက်ခြင်းကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ရဲ့ အခြေခံအဆင့်ကို လက်ရှိ စုစုပေါင်း ၁၁ နှစ် သတ်မှတ် သင်ကြားနေရာကနေ နောင် နိုင်ငံတကာ နည်းတူ ၁၂ တန်းအဖြစ် သင်ရိုးတွေ ပြုပြင်တဲ့အခါ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးဖို့ ပြင်ဆင်နေတာတွေထဲက တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၁ Yangon University in Yangon
၂ Yohei Sasakawa, centre, Japan Goodwill Ambassador for the Welfare of the National Races in Myanmar, Chairman of the Nippon Foundation, Mikio Numata, left, Japan ambassador to Myanmar, and Sao Aung Myat, right, Shan State chief minister, cut ribbon during
၃ In this photo taken on April 5, 2008, graduated students pose for photos outside the convocation hall in the main campus of Yangon University in Yangon, Myanmar. The university was once one of Asia's finest andapoignant symbol of an education system cri
၄ In this photo taken on April 5, 2008, graduated students pose for photos outside the convocation hall in the main campus of Yangon University in Yangon, Myanmar. The university was once one of Asia's finest andapoignant symbol of an education system cri